Mamelom-panantenana Ny Mpamaky Ny ‘Gazety Tokana Miabo Ao India’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 15:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Ελληνικά, Español, srpski, 日本語, English
Nosoratan'i Madhura Chakraborty ity lahatsoratra ity ary niseho voalohany tao amin'ny VideoVolunteers, fikambanana iraisam-pirenena iray nahazo loka tamin'ny fampahalalam-baovaom-piarahamonina tao India. Navoaka ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny tatitra naverina eto ambany.
Very fanantenana tamin'ny fomba fijery miiba omen'ireo gazety isa-maraina i Piyush Ghosh sy Tuhin Kumar Singh, mpinamana tanora roa ao Bhopal, renivohitry ny fanjakana indiana ao Madhya Pradesh. Vokatr'izany dia lasa feno fiahiahiana ao anatin'ny tahotra sy ny fisalasalana ny fiarahamonina. Tsy mifampatoky intsony ny olona ary tsy matoky fikambanana, mpanao politika ary rafitra.
Tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fanomezam-baovao miabo ihany ny The Optimist Citizen (Olom-pirenena feno fanantenana), tantara avy amin'ny tantaran'aingam-panahy, avy amin'ireo maherifo tsy fantatra, ny fitantanana tsara, ary ny fihetsika fankaherezana izay matetika tsy resahan'ireo sehatra fampahalalam-baovao mahazatra noho izy ireny j tsy mampientanentana .
Nanazava ny fomba nivoaran'ity gazety ity tao amin'ny lahatsary tatitra iray ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers Ramlal Baiga:
Nanazava tao anatin'ny antsafa ho an'ny gazetiboky Entrepreneurship India i Tuhin :
Ireo tantara toy ny an'ilay zazavavy kely sahirana iray 10 taona izay mitantana ny trano famakiam-boky ho an'ny ankizy any ambany tanàna misy azy, ny an'ilay lehilahy Israeliana iray izay tonga tany India ary namboly ny ala fihinana tamin'ny tany ngazana mirefy 70 akra, ny an'ilay mpivady izay nanomboka ny orina mpanasoa ho an'ny ankizy manana aretina tsy fahita firy taorian'ny nahafatesany ny zanany vavy kely iray, ny an'ilay mpanakanto Alema iray izay nanova ny tanànakely tany Himachal Pradesh ho sehatry ny zavakanto mba ho fampiroboroboana ny fizahan-tany sy ny fivelomana ao an-tanànakely sy ireo tantara maro hafa ihany koa. Ireo tantara ireo no nanome aingam-panahy anay ary mino izahay fa hanome aingam-panahy ireo olona an-tapitrisany maro kokoa izany.
Tena mampahery tokoa ny mamaky ny tantaran'izy ireo momba ny fanovana miabo tanaty fotoan-tsarotra. Nianatra fisantarana andraikitra sy fanaovana Samaritana Tsara Fanahy manerana ny firenena izahay fa tsy nanoka-toerana ho fampitam-baovao manome vahana ny fanaka antitra navelan'ny mpanao politika mamba noana, na ny resaka fifosana amin'ny pejy telo. Asongadina ao amin'ny fizarana samihafa ao amin'ny The Optimist Citizen ireo tantara izay tsinontsinoavin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Afaka manaraka ny gazety ao amin'ny Twitter, Facebook ary Instagram ianao .